शिवको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुट्दै
बाजुरा– बाजुराको गौमुल गाँउपालिका –५ मनाकोट बस्ने १७ वर्षीय शिव रोकायाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटेको छ।
स्वास्थ्य खबर अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएपछि देश– विदेशबाट आर्थिक सहयोग जुटेको हो।
आर्थिक अभावमा चार महिनादेखि भाँच्चिएको खुट्टाको उपाचर गर्न नसकेको समाचार प्रकाशन प्रकाशनपछि साई समाज सेवा निधिका अध्यक्ष डा सुन्दरमणि दिक्षित र महासचिव रेवा देवी दिक्षितबाट ५० हजार रुपैयाँ सहयाेग प्राप्त भएकाे छ । त्यसैगरी गौमुल गाउँपालिका बाजुराका अध्यक्ष हरि रोकाया र उपाअध्यक्ष सिता थापाले १० हजार आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
त्यस्तै बडिमालिका नगरपालिका बस्ने गिता रावलबाट ५ हजार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक बाजुराका प्रबन्धक जितजङ्ग सिहंबाट ५ हजार, गौमुल घर भएका ज्ञान बहादुर रावलबाट ५ हजार, काठमाडौँमा होटल व्यवसाय गर्दै आएक कृष्ण खड्काबाट ५ हजार १ सय, नेपाल महिला संघ बाजुराकी अध्यक्ष अमृता सिहंले ३ हजार, बिनिस्ता धामीबाट २ हजार जम्सेड इड्रिसबाट ५ हजार अग्नि शाहीबाट ३ हजार एक सय रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएकाे छ।
त्यस्तै हाल हङहङ बस्दै आएकी मेनका गुरुङले ५ हजार सहयाेग गरेकी छिन्।
सहयोग रकम आवश्यकता अनुसार बिरामीलाई दिइने र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थपेडिक डा. ऋषि बिष्टसँग समन्वय भइरहेको छ।
बिरामी शिवको उपचारका लागि रकम संकलन कार्य जारी छ।
उनकाे उपचारका लागि अभियान चलाइरहेका हेल्पर कृयू नेपालका अध्यक्ष बिरेन्द्र थापाले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्।
गाउँमा बाख्रा चराउन गएको बेला भिरबाट लडेर शिवकाे खुट्टा भाँच्चिएको थियो । डेढ महिना देखि उनी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्।
घरमा एक्लाे रहेका शिवले भाँच्चिएको खुट्टाको उपचार गर्न नसकी दुर्इ महिना घरमै थन्किएकाे समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न ठाउँबाट सहयोग जुट्न थालेकाे हाे।
साई समाज सेवा निधिका अध्यक्ष सुन्दरमणि दिक्षितले भने समाचार आएपछि जानकारी पाएको र शिवकाे उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेको वताएका छन्।
आमा धौली रोकायाको शिव ८ महिनाको हुँदा रक्त क्यान्सरका कारणले मृत्यु भएको थियो भने बुवा पदमबहादुर रोकाया पनि १५ बर्ष पहिला भारत गएको र त्यसपछि सम्पर्क नआएको स्थानीय राज रोकाया बताउँछन् । एक्लै बस्दै अाएका शिवलाई दुई महिना सम्म पनि कसैले सहयाेग गरेकाे थिएन।
खुट्टाको अप्रेशन गर्नका लागि अझै समय लाग्ने ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. ऋषि धामि बताउँछन् । उनले खुट्टाको अप्रेशन गर्दा रड राख्नका लागि पैसा अावश्यक पर्ने बताए । बेड र खानाको पैसा निःशुल्क गरेको भएपनि फलफुल र पोषिलो खानका लागि शिवसँग पैसा थिएन।